भदौ ७, २०७८ सन्ध्या पौडेल
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण विद्यालय पुनः बन्द भएपछि विद्यालयहरुले गरेको आन्तरिक मूल्याँकन कै आधारमा कक्षा चढ्दै गएकी १६ वर्षीय आमाईरा पटेल विद्यासदन माध्यमकि विद्यालयको कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा हुन् । पढाइप्रति अत्याधिक रुचि भएकी उनलाई पटक–पटकको लकडाउन र विद्यालय बन्दले अध्ययन अध्यापनमा असर पारेको उनले बताइन् ।
वीरगंज महानगरपाकि वडा नं १४ चिनीमिल पिपराका प्रमोद पटेल र अनिता पटेलकी पहिलो सन्तान हुन् आमाईरा । उनका दुई भाइ छन् । उनको ठूलो भाइ संजय पटेल सोही विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छन् भने सानो भाइ अजय पटेल पनि कक्षा ५ मा अध्ययनरत छन् । उनका वुवा प्रमोदको प्रमोद निमार्ण सेवा छ भने आमा अनिता सिलाई कटाई गर्छिन् ।
भौतिक दुरी र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराई गएको आइतबारदेखि विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि उनी विद्यालय आउन थालेकी छन् । विद्यालय आउनुपूर्व भने उनी अनलाईन कक्षा मार्फत अध्ययन गर्दै थिइन् । लामो समयपछि विद्यालय आउन पाएकोमा निकै खुसी लागेको उनले बताइन् । एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ । कक्षामै उपस्थित भएर पढ्नुको मज्जा नै बेग्लै उनले भनिन् । अनलाईन कक्षामा त राम्ररी बुझिदैन, त्यसमा पनि छिनछिनमै विजुली जाने, इन्टरनेटको समस्या अनि लामो समयसम्म मोवाइलको प्रयोग गरेर होला टाउको र आँखा दुख्ने समस्या पनि हुने गरेको उनले तर्क गरिन् । विहान ७ बजेदेखि कक्षा सुरु हुन्थ्यो उनले बताइन् ।
तर अहिले विद्यालयमै पढ्न पाउँदा निकै सहज भएको आमाईराले बताइन् । कोरोनाको जोखिम कहाँ छैन र ? बजार, खुलेको र भिडभाड उत्तिकै छ । हामी घरमाभन्दा बढी सुरक्षित त विद्यालयमा छौ । यहाँ जनस्वास्थ्का सबै मापदण्ड पूरा गरिएको छ उनले भनिन् । लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा आफ्नो अध्ययन र भविष्य नै अनयौलमा परेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन् कहिलेसम्म यसरी विद्यालय बन्द गर्ने ? हाम्रो भविष्य हाम्रो शिक्षण सिकाइलाई कहिलेसम्म स्थगित राख्ने । सधै यसरी विद्यालय बन्द गरेर बच्चाको भविष्य अन्धकारमा राख्नु त राम्रो संकेत होइन । विद्यालयमा भन्दा बढी भिडभाड त बजारमा छ । बन्द गराउने हो भने सबै क्षेत्र बन्द गराउनु पर्छ । नभए विद्यालय पनि संचालन गर्ने वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ आमाइराले आक्रोस मिसाउँदै बताइन् ।
विज्ञान विषय मन पराउने उनी भविष्यमा गाइनेक्लोजिष्ट बन्ने बताउँछिन् । मेरो आमाको सपना थियो गाइनोक्लोजिष्ट बन्ने । तर परिवारको समस्याको कारण उहाँको सपना पूरा हुन सकेन । त्यसैले आमाको सपना पूरा गर्न पनि म त्यो सोचमा छु उनले संक्षिप्तमा बताइन् । घरका अभिभावकले पनि साथ दिने उनले तर्क गरिन् । घरमा नेटको समस्या र सिकाउने कोही नभएकोले दुई महिनादेखि आफ्नो मामा घरमा बस्दै आएको उनले तर्क गरिन् । मामा घरमा मलाई सिकाउने मामा माइजु र छिमेकी दाइ हुनुहुन्छ । यो वर्ष मेरो एसइई हो । मलाई मेरो पढाइ बिग्रेला कि भन्ने चिन्ता लागिरन्छ । किनकी मेरो अध्ययनले नै मेरो लक्ष्य निर्धारण गर्छ । मेरो मामा माइजु शिक्षक हुनुहुन्छ । उहाँरुले नजानेका सबै सिकाउने भएकोले एसइईसम्म म त्यही बसेर पढ्छु उनले निकै सोचमग्न हुदै बताइन् ।
तर यो कोभिड–१९ मेरो लक्ष्यको बाधा बनेको मैले महसुस गरेकी छु । कोभिड सुरु भएदेखि राम्ररी अध्ययन गर्नै पाएका छैनौ । सबै घरमा बसेर मोवाइलामा मात्रै घोत्लिरहँदा हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा के असर पर्छ भन्ने बारे सबैले सोच्नु पर्छ आमाईराले निकै गम्भिर कुरा गरिन् ।
सोमवार, भदौ ७, २०७८, ११:०८:००
महामारीको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षामा ध्यान दिन आग्रह कोभिड कहरमा भात घटाएर ‘ग्रीन’ सलाद खान र भिटामिन ‘डी’ लिन आग्रह डा योगी
जेठ २९, २०७८ सन्ध्या पौडेल